Johnny E - Mag tsy mampino
Ahoana ny fomba hamoronana ekipa hilalao cricket fantasy an-tserasera
Ireo olona adala amin'ny cricket rehetra any India izao dia manana toerana vaovao hanehoana ny fitiavany tsy ho faty amin'ny cricket ary tsy iza izany fa ny Cricket Fantasy. Ity fampiharana ity dia ahafahanao milalao eny an-kianja mandritra ny efitranonao miaraka amin'ny cricket toy ny fiainana…
Miasa amin'ny maha-mpiasam-panompoana anao
Raha mieritreritra momba ny asa ianao, na ny hisafidianana izay manampy anao hisafidy ny fampianarana GCSE, A-Level na oniversite, na satria mieritreritra fanovana zavatra mahaliana kokoa ianao, dia matetika ny rafi-pitsarana ady heloka be vava no lohalaharana ny sainao. …
Famolavolana ny toerana malalaka fampiantranoana ivelany
Raha tsara vintana ianao miaina amin'ny toetrandro mafana kokoa toa an'i Hawaii, dia fantatrao fa tena zava-dehibe ny fananana toerana fampiantranoana ivelany izay ahafahanao mivory miaraka amin'ny namanao sy ny fianakavianao. Manomboka amin'ny fametrahana ny faritra mahamety tsara ka hatramin'ny fametrahana ny fampiasa…
Ahoana no fomba fampiasana CBD mitokana?
Cannabinoids dia akora simika hita ao amin'ny rongony, izay tompon'andraikitra amin'ny vokatra marihuana marobe - ny tena malaza indrindra dia THC sy CBD. Ny ankamaroan'ny olona dia mahalala THC, satria miteraka "avo" psychoactive io raha mampiasa rongony. CDB, etsy ankilany,…
Antony 3 hanaovana fialan-tsasatra any Arizona
Arizona dia manana indostrian'ny fizahantany miroborobo izay nitondra $ 23 miliara dolara tamin'ny vola niditra tamin'ny fizahan-tany tamin'ny taona 2017. Fantatra amin'ny anarana hoe The Grand Canyon State, Arizona izay mety hifandraisany amin'ny zavatra manintona malaza indrindra sy ny maripana mamirifiry ao Phoenix sy ny masoandro mafana any an'efitra,…
Mandrosoa ny vatanao sy ny sainao amin'ireto menaka tena ilaina ireto
Ny menaka esansiela dia nampiasaina nandritra ny tantara noho ny toetra manitra sy manasitrana. Ny fanomezana menaka manitra sy miora eo amin'ny sehatry ny fahaterahana dia menaka manitra tena sarobidy tamin'izany fotoana izany. Ny siny iray tamin'izy roa dia lafo tamin'izany fotoana izany. Fitsaboana maoderina ary…
Fanomezana 3 homena ny mpanakanto amin'ny fiainanao
Mety ho sarotra ny miantsena mpanakanto. Ny fahaizan'izy ireo mamorona dia mahatonga anao hahatsapa fanerena hanome azy ireo ny fanomezana tsara indrindra azonao eritreretina. Ny zavatra voalohany mety hiditra ao an-tsainao dia ny fitaovan'ny mpanakanto na ny kanto kanto mahaliana, saingy indraindray daholo izany…
Ny Zatovo dia manararaotra zava-mahadomelina… Inona no ataoko?
Misy zavatra vitsivitsy sarotra kokoa noho ny mahita fa ny zanakao dia nanjary nandevozin'ny zava-mahadomelina. Na dia maro aza no mety milaza fa ny fiovan'ny fitondran-tena amin'ny fahatanorana na ny fiovan'ny hormonina (izay matetika no misy izany), indraindray kosa misy fiovana tonga…